Muuri News Network » Faah Faahin: Dhagar Qabe ka tirsan Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay Magaalada Marka..
Faah Faahin: Dhagar Qabe ka tirsan Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay Magaalada Marka..
Oct 21, 2018 - Comments off
Ciidmada 14october iyo kuwa Ciidamada Dowlada Fedaraalka Soomaaliya ayaa saaki gacanta kusoo dhigay labo dhagar qabe oo ka tirsan Maleeshiyaadka Al shabaab. Isku day baxsi ka dib ciidamada ayaa barqanimadii maanta Magaalada Marka ku dhex toogtey mid ka mid ah maleeshiyaadka Al shabaab.
Dhagar qabayashan ayaa saaki laga soo qabtey buuraha iyo siiimanka dhaadher ee duleedka Magaalada Marka. mid ka mid ah dhagar qabayashan ayaa isku dayey inuu ka baxsado gacanta Ciidamaa Dowlada ayaa lagu toogtey Magaalada Marka.
Waxaana baaritaano lagu wada mid ka mid ah Maleeshiyaadkasi oo wax lagu weydinayo saldhiga Booliska ee Magaalada Marka. Howlagadan ayaa ka dambeysey shalay gelinki danbe waxaa gudaha magaalada Marka lagu diley MAANGOW oo ka mid ahaa muruqmaalatada Magaalada Marka.
Gudoomiyaha Magaalada Marka Xasan Cumar Macalim oo aan qadka taleefonka ku helney ayaa inoogu waramay xaalada Magaalada wuxuuna sheegey in Magaalada Marka aan marna qof soomaliyeed dhiigisa meel cidlo ah lagu daadanynin oo ay mas.uliyadisa tahay badbaadinta Shacabka Magaalada Marka.
Ciidamada 14october iyo Ciidamada Dowlada Federaalka Soomaliya ayaa ah kuwa firfircoon oo howshoda u gudanayo sidii loo baahnaa